Chọta ọrụ gị na nrọ na UAE na Job pro-AE - Dubai bụ Azụ
Gini mere anyi ji na ebubo maka CV Uploading to Dubai?
Chọta ọrụ nrọ gị na UAE na Job pro-AE. UAE n'ozuzu ha na-ekwu okwu, bụ otu n'ime mba kachasị baa ọgaranya n'ụwa, o jisie ike iwelie akụ na ụba ya ọtụtụ ugboro iri na abụọ maka afọ 50 ikpeazụ, N'oge mmalite nke akụkọ ihe mere eme ya, ọtụtụ n'ime enwetara uru site na ire nke mmanụ mmanụ. Ka ọ dị, mana ugbu a azụmaahịa na obere azụmaahịa na-ebute ụzọ, ọkachasị na mpaghara akụ na ụba efu n'efu. Nke a nwere mmetụta dị ukwuu n'ụkpụrụ nke ahịa ọrụ na ohere ọrụ na UAE.
Onu ogugu nke obodo buru nke ndi mmadu mebere expats ndị bịara mba ahụ na-achọ ọrụ na Dubai, Abu Dhabi, ma ọ bụ obodo ndị ọzọ. Ihe dị ka 85% nke ndị UAE bụ ụmụ amaala nke mba ndị ọzọ. E kenyere ndi ala ọzọ ihe di nkpa ọrụ na mmepe akụ na ụba maka afọ iri na-abịanụ, ọ bụ ezie, n'ihi uto ngwa ngwa, usoro nke ohere ọrụ ga-agbanwe ebe a. Can nwere ike ịhụ a ndepụta nke ọrụ dị elu na UAE na saịtị ndị akọwapụtara nwere oghere, dịka ọmụmaatụ, ebe a: workpro.
Dịka ọmụmaatụ, ugbu a ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ọrụ maka ịchọrọ ọfụma na UAE, n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke nnukwu ihe owuwu (okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, ebe ịzụ ahịa na ogige obibi), mana ka oge na-aga, ego ha ga-agbadata ma nke a, n'aka nke ya, ga-ebelata ọnụ ọgụgụ nke ọnọdụ ndị dị otú ahụ. N'otu oge ahụ, mmepe nke azụmaahịa ga-eduga n'ịba ụba n'ihe achọrọ maka ndị na-ahụ maka ire ere na ndị na-ere ahịa, yabụ ọnụọgụ nke ụdị ọrụ ahụ na Dubai ga-eto obere oge. Companieslọ ọrụ obodo na-akpọ ndị mba ọzọ ọrụ ga-atụle ahụmịhe njikwa, ọkachamara na, ahụmịhe n'ogo mba ụwa.
Otu n'ime ihe ndị na-agba ndị mba ọzọ ume ka ha zipụghachi (CV) ha na-achọ ohere na UAE bụ ndị na-esonụ:
• ụgwọ ọnwa dị elu. Salarygwọ ọnwa gbagoro na UAE dị elu karịa ọtụtụ mba ndị ọzọ n'ụwa.
• Otu ezigbo ngwugwu - mkpuchi mkpuchi, mkpuchi mmadụ, wdg.
• Iguzosi ike. Ọtụtụ akwụkwọ nkwekọrịta ogologo oge abanyela maka afọ abụọ ma ọ bụ atọ.
• Atụmanya ọrụ. Ha bụ lekwasịrị anya na mmepe nke ndị ọrụ ma na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe ọmụmụ oge niile, ọzụzụ, ọmụmụ agụmakwụkwọ dị elu.
• Usoro dị mfe maka inweta visa ọrụ. Usoro ahụ dum ga-ewe izu 2.
• Ọ dịghị ụtụ isi ego. Enweghị ụtụ isi na ụgwọ maka ma ndị ahịa ma ndị nwere ọrụ iwu na UAE.
• Ọnụ ọgụgụ mpụ dị ala.
Onu ogugu ego nke di na UAE ka edobere ya n’aka ndi oru, dabere n'ọnọdụ, ihe ọmụma, na ahụmịhe nke onye na-arịọ arịrịọ. Ná nkezi, ndị ala ọzọ na-enweta dirhams 2000 – 3000 kwa ọnwa maka ọrụ ndị na-eme Achọghị ọzụzụ pụrụ iche, na 10,000 – 30000 n'ọkwá tozuru oke (! AED = 0.27 USD).
Otu n'ime ọrụ ndị a na-achọsi ike bụ ndị na - esonụ (a na - akwụ ụgwọ n'ime ego obodo):
Enweghị ụtụ ịkwụ ụgwọ na UAE. Nke ahụ bụ, onye ọrụ na-anata ego niile a natara. Ọnụ ọgụgụ nke ụgwọ ahụ na-agụnye ọnụego ntọala, mgbakwunye, atụmatụ, na bonuses.
A na-enye ndị ọrụ ala ọzọ ọrụ ndị na-esonụ:
1. Ụgwọ oge.
2. Ịkwụ ụgwọ maka awa abalị site na 9 ruo elekere 4
3. Ụgwọ na-agbanye ruo ụbọchị 30 mgbe afọ nke ọrụ.
4. Inshọransị ọgwụ maka onye ọrụ na ndị ezinụlọ ya.
5. Ịtụle esemokwu nke ịrụ ọrụ site n'aka ndị Ọrụ Immigrashọn na Ngalaba Na-arụ ọrụ nke UAE.
Izu ọrụ bụ ụbọchị ise ma bụrụ awa 40 (site na 8 am ruo 5 pm). Ogologo oge nke ụbọchị ọrụ agaghị agafe elekere 8 kwa ụbọchị. Enwere ike ịbawanye iwu a maka ọrụ aka na ụlọ ọrụ akọwapụtara, dịka ọmụmaatụ, na ọdụ ụgbọelu na azụmaahịa ụlọ ọrụ. Offbọchị ezumike na-abụkarị Fraịde na Satọde.
Emirates nwere atụmatụ ya. Ndị mba ọzọ ndi natara onodu iwu na Dubai anaghi enye ndi amaala ha. Kama, E nyere ndị expats ebe obibi visa maka oge nke 3 afọ (enwere ike ịgbatị). Ọ dịkwa mkpa icheta na a na-asọpụrụ ọdịnala na UAE. Ya mere, ndi ala ọzọ ndi n’abia acho ọrụ na UAE Kwesịrị ịkwanyere ụkpụrụ ọdịbendị obodo ùgwù, ọ bụ ezie na a ga-ahụrịrị na mba ahụ na-anabata ndị ala ọzọ karịa ndị agbataobi nọ na mpaghara (Iran, Saudi Arabia, Oman, Qatar). N'izugbe, UAE bu obodo oma di ezigbo uto na ezi olile anya maka oru ndi ala ọzọ.
Anyị na-agba gị ume itinye akwụkwọ na JobPro.ae!
chọta ọrụ na Dubai. N'ebe ahụ, ị ​​nwere njikọ na ọrụ a na-enye maka emelitere. Ndị otu anyị nke ndị na - ahụ maka ọrụ ego ejisie ike gosipụta na ọrụ Pro bụ ezigbo ụlọ ọrụ ebe ihe karịrị 80% nke ndị na-achọ inweta ọrụ na-enye site na ụlọ ọrụ dị na UAE.
Chọta ọrụ nrọ gị na UAE na Job pro-AE. Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi nduzi maka Ọrụ na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.